အမေရိကန်လက်စ်ဗီးဂတ်မှာ စက်သတ်နတ်နဲ့အကြမ်းဖက်၍ လူ50ကျော် သေ 400 ကျော်ဒဏ်ရာရ – Lat Khat Than
အမေရိကန်လက်စ်ဗီးဂတ်မှာ စက်သတ်နတ်နဲ့အကြမ်းဖက်၍ လူ50ကျော် သေ 400 ကျော်ဒဏ်ရာရ
ခုနလေး ကမှ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ၊ အမေရိကား က လက်စ်ဗီးဂတ်ရှိ Mandalay Bay ကာဆီနိုဂီတပွဲတွင် အမေရိကန်လူမျိုး အသက်၆၄ နှစ်ရှိလူတစ်ဦးသည် ၄င်းတည်းခိုနေသည့် Mandalay Bay ဟော်တယ်ရဲ့ 32 ထပ် အခန်းမှ စက်သေနတ်နဲ့ မရပ်မနား တရစပ် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒုတိယမသင်္ကာစရာ အမျိုးသမီးနှင့် သေနတ်သမား
ထိုအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လတ်တလော သတင်းအရ အယောက်50သေတယ် လို့သိရပြီး 400 ကျာ် ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ကာ အရေးပေါ် လူနာ တစ်ရာကျော်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်၊ သေနတ်သမားကိုတော့ရဲက 32 ထပ်မှာ အသေပစ်သတ်လိုက်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ လူအသေပျောက်နဲ့ ဒဏ်ရာရရှိမှုကတော့ အခုလောလောဆယ် အရအတွက်သာဖြစ်ပြီး မကြာခင်အချိန်မှာ ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ပါမယ်လို့ CNN ကပြောခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလော သတင်းအရ IS များက ၄င်းတို့ လက်ချက်ဟုဆိုသော်လည်း
အမေရိကန် အာဏာပိုင်များ အတည်မပြုသေးပဲ သေနတ်သမားဟာ အမေ ရိကန်လူမျိုး တစ်ဦးသာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
နောက်ထပ် မသင်္ကာစရာ ဒုတိယလူအဖြစ် အတူနေချစ်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟု ယူဆရသည့် သူအား ဆက်လက်ရှာဖွေနေသည်ဟု သိရပါသည်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းတွင် အကြမ်းဖက်မှု့ တွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေနတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ မနေ့ ကလဲ ကနေဒါနဲ့ ပြင်သစ်မှာပါ ဖြစ်ပွားသွားသေးပါတယ်။
Video file ကြည့်ချင်သူများအောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါသည်
People used metal barricades and wheelbarrows to help injured …
After the Las Vegas shooting, people used metal barricades and wheelbarrows to transport the injured away from the scene. At least 50 people are dead and 200+ injured in what is now the deadliest mass shooting in US history. Follow live updates: http://cnn.it/2fCpul6
Posted by CNN on Monday, October 2, 2017
ခုနလေး ကမှ ဖွဈသှားတဲ့ အဖွဈအပကျြပါ၊ အမရေိကား က လကျဈဗီးဂတျရှိ Mandalay Bay ကာဆီနိုဂီတပှဲတှငျ အမရေိကနျလူမြိုး အသကျ၆၄ နှဈရှိလူတဈဦးသညျ ၄ငျးတညျးခိုနသေညျ့ Mandalay Bay ဟျောတယျရဲ့ 32 ထပျ အခနျးမှ စကျသနေတျနဲ့ မရပျမနား တရစပျ ပဈခတျခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ။
ထိုအကွမျးဖကျပဈခတျမှုကွောငျ့ လတျတလော သတငျးအရ အယောကျ50သတေယျ လို့သိရပွီး 400 ကျြာ ဒဏျရာရသှားခဲ့ကာ အရေးပျေါ လူနာ တဈရာကြျောရှိကွောငျးသိရပါတယျ၊ သနေတျသမားကိုတော့ရဲက 32 ထပျမှာ အသပေဈသတျလိုကျတယျ လို့ သိရပါတယျ။ လူအသပြေောကျနဲ့ ဒဏျရာရရှိမှုကတော့ အခုလောလောဆယျ အရအတှကျသာဖွဈပွီး မကွာခငျအခြိနျမှာ ဆကျလကျ ထုတျပွနျပါမယျလို့ CNN ကပွောခဲ့ပါတယျ။ လတျတလော သတငျးအရ IS မြားက ၄ငျးတို့ လကျခကျြဟုဆိုသျောလညျး
အမရေိကနျ အာဏာပိုငျမြား အတညျမပွုသေးပဲ သနေတျသမားဟာ အမေ ရိကနျလူမြိုး တဈဦးသာဖွဈကွောငျးသိရပါတယျ။
နောကျထပျ မသင်ျကာစရာ ဒုတိယလူအဖွဈ အတူနခေဈြသူအမြိုးသမီးတဈဦးဟု ယူဆရသညျ့ သူအား ဆကျလကျရှာဖှနေသေညျဟု သိရပါသညျ။ ဒီရကျပိုငျးအတှငျးတှငျ အကွမျးဖကျမှု့ တှဆေကျတိုကျဖွဈပှားနနေတာကို သတိပွုမိပါတယျ။ မနေ့ ကလဲ ကနဒေါနဲ့ ပွငျသဈမှာပါ ဖွဈပှားသှားသေးပါတယျ။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောသို့ သွားရောက် ခဲ့သည့် သံတမန်များက ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်
ဇနီးနှင့် စကားများရာမှ ဇနီးနှင့်အတူ မယားပါသမီး သုံးယောက်တို့အား ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်